Midowga Yurub oo walaac ka muujiyey waqti kordhinta guddiga doorashooyinka+Daawo.
Muqdisho:- Nicolas Berlanga Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxuu walaac uga muujiyey waqti kordhinta loo sameeyay guddiga doorashooyinka.
Wakiilka wuxuu sheegay in arintaas ay keeni karto in dib u dhac uu ku yimaado doorashooyinka guud ee Soomaaliya.
“Midowga Yurub wuxuu walaac ka muujinayaa suurta-galnimada cawaaqibka waqtiga cusub ee loo qabtay in guddiga doorashooyinka uu ku horyimaado baarlamanka inay ka dhallan karto doorasho waqtigeeda ku dhacdo,” ayuu qoraalkiisa ku yiri Berlanga.
Halka Nicolas Berlanga oo ah Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya, iyadoo shalay guddiyada joogtada ah ee golaha shacabka ay waqti kordhin u sameeyeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka, kaas oo la rabay in 27-ka bishan uu hor yimaado xildhibaanada golaha shacabka.
Guddiga ayaa loo kordhiyay hal bil waxaana lagu balansanyahay in kulanka golaha shacabka ay hor tagaan 27-ka bisha dambe ee June, isla amrkaana ay horjeediyaan warbixinta ku saabsan nuuca doorasho ee dalka ka dhici karta.
Please join us in welcoming our new Amb HE Nicolas Berlanga Martinez @NBerlangaEU as he spells out his priorities for Somalia, in the beautiful language of SOMALI.@EUCAPSOM @EUTMSomalia @EUNAVFOR pic.twitter.com/SvCghQz7fj
— EU Del in Somalia (@EU_in_Somalia) June 8, 2019